Madaxwaynaha Barcelona Oo Ka Cabaaday Xayiraaddii FIFA, Sheegayna In Carruurta Ay Soo Qafaalan Jireen Muddo 35 Sannadood
HomeSpainMadaxwaynaha Barcelona Oo Ka Cabaaday Xayiraaddii FIFA, Sheegayna In Carruurta Ay Soo Qafaalan Jireen Muddo 35 Sannadood
Madax waynaha kooxda Barcelona Josep Maria Bartomeu ayaa si tiiraanyo leh uga hadlay ganaax culus oo ay ku soo rogta FIFA, kaas oo kooxdaas lagaga mamnuucay inay wax ciyaartooyo ah soo iibsan karto muddo laba xilli-suuq ah.
Bartomeu ayaa sheegay inay ciyaartoy soo iibsan doonaan gaar ahaan gool haye iyo difaac marka uu furmo suuqa kala iibsiga ee xagaaga oo ah bilowga bisha June illaa dhamaadka July.
Mr. Bartomeu, waxa kale oo uu difaacay siyaasadda kooxdiisa ee ay ku gasho sayladaha ciyaartoyga, kaas oo ay ku soo ugaadhsato ciyaartooyo da’yar, kuwaas oo ay ku darto akaademigeeda, isla markay kacaamaanna noqda rukunnada kooxda waaweyni ku dhisan tahay, waxaanu yidhi. “Waxaannu dareemaynaa cadho badan waayo khalad ayaa la naga gelayaa, FIFA ma waxay go’aanno ka soo saareen oo ay nagu ganaaxeen arrin ay kooxdu ku tiirnayd muddo 35 sannadood ah”.
“FIFA way ogtahay inaannu sifiican u xanaanayno carruurta iyo in aannu u fidinno waxbarasho taas oo laga yaabo in aanay ka heleen wadamadooda”.
“Diyaar uma nihin in aannu iska dayno waxbarashada aannu siinayno carruurta, waannu sii wadi doonaa in aannu is difaacno waananu difaaci doona xaqayaga”. Ayuu yidhi
Madaxweynaha kooxda kubadda cagta ee Barcelona, waxa uu u soo jeediyey FIFA inay faraha kala baxdo arrimaha daakhiliga ah ee kooxdaas, waxaanu yidhi “Farihiina kala baxa La Masia, tani waa farriin aannu doonayno inaannu u dirno xubnaha kooxda iyo taageerayaasha intaba, farihiina ka laabta La Masia, waannu u dagaalami doonnaa inaannu difaacno La Masia waayo waxaa ka soo baxay ciyaartooyadayaga kooxda koowaad ee hadda kuwaas oo noqday kuwa ugu fiican adduunka”.
Si kastaba ha ahaatee, kooxda Barcelona waxay xaqiijisay inay rafcaan ka qaadanayso go’aanka ay FIFA kaga xayirtay inay kooxdu galaangal u yeelato sayladaha ciyaartooyada labada xili-suuq ee foodda inagu soo haya, taas oo sabab looga dhigay inay soo qafaalato carruur si sharci darro ah ayy ugu haysato xeradeeda tababarka.
Luiz Felipe Scolari Oo Baadhisi Ku Socoto
David Villa Oo si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu ka fadhiisanayo ciyaaraha heerka caalami